ကခုန်ခြင်းဟာ တကယ် ပျော်ဖို့ကောင်းသလို ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
အဆက်မပြတ် လှုပ်ရှားပေးတာက သင်ရဲ့ ကာယကျန်းမာရေးအတွက်သာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကိုပါ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သင်က အပျော်တမ်းကခုန်သူတစ်ဦးဖြစ်စေ၊ ဝါသနာရှင်တစ်ဦးပဲဖြစ်စေ ဘာလို့ ဆက်ပြီး ကနေသင့်လဲဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက် (၁၀) ချက် ရှိပါတယ်။
၁။ ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်
နယူးအင်္ဂလန် ဆေးဝါးအထူးပြု ဂျာနယ်ရဲ့ သုတေသနပြု တွေ့ရှိချက်အရ ကခုန်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်မှု မဖြစ်အောင်လည်း တားဆီးပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခြားသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရလည်း အေရိုးဗစ်ကစားခြင်းဟာ လူကြီးပိုင်းရောက်လာပြီး hippocampus လို့ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထိန်းချုပ်တဲ့ အပိုင်း ကျုံ့သွားတဲ့နှုန်းကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။. ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကကွက် အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းလဲပြီး လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုတာကို အချိန်ယူ မှတ်သားရတဲ့အတွက် ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကခုန်ခြင်းလိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ အစီအစဉ်ချတတ်ဖို့၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ စတဲ့ စွမ်းရည်တွေကို တိုးတက်စေတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ တွေ့ရှိထားပါတယ်။ .
၂။ ခန္ဓာကိုယ် ပျော့ပျောင်းစေတယ်
ကခုန်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းမှုကို လျော့နည်းစေပြီး ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ ဒီအတွက် အရမ်းကြီး ကြိုးစားစရာ မလိုပါဘူး။ ကရင်း၊ ခုန်ရင်းနဲ့ အလွယ်တကူ ခြေလက်ဆန့်တာတွေ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အဆစ်နာတာကို သက်သာစေပြီး တခြား အားစိုက်ပြီးလုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကြောင့် ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုတွေကိုပါ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။.
၃။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်
အသက်အရွယ် အိုမင်းမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပညာရပ်အထူးပြုဂျာနယ်တစ်ခုရဲ့ သုတေသနအရ သီချင်းလေးဖွင့်ပြီး သံစဉ်အလိုက် ကခုန်ပေးမယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခြားသော လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေမှာလည်း ကခုန်ခြင်းဟာ စိတ်ခံစားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့ serotonin ဟော်မုန်းကို တိုးပွားစေတယ်လို့ အလားတူ တွေ့ရှိရပါတယ်။ .
၄။ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်
စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေအပေါ် ကခုန်ခြင်းရဲ့ သက်ရောက်မှုကို သုတေသနပြုရာက တွေ့ရှိချက်မှာဆိုရင် အဖွဲ့လိုက် ကခုန်ခြင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်နေတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေဟာ မပါဝင်သူတွေထက် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှု လက္ခဏာတွေ လျော့နည်းနေပြီး ခါတိုင်းထက် ပိုမိုလန်းဆန်းတက်ကြွနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။.
၅။ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေပါတယ်
လှုပ်ရှားမှုများများ လုပ်တာက ကိုယ်အလေးချိန် များများလျော့ကျစေပါတယ်။ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ မနုဿဗေဒဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အေရိုးဗစ် ကစားတာဟာ စက်ဘီးစီးတာနဲ့ ခပ်မှန်မှန် ပြေးတာလိုမျိုး အလေးချိန်လျော့ကျစေနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ .
၆။ စွမ်းအား မြင့်မားလာစေပါတယ်
ပညာရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ ထုတ်ဝေရေးနဲ့ ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးရေး ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ သုတေသနအရ အပတ်စဉ် ကခုန်တဲ့ အစီအစဉ်တွေဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေပြီး စွမ်းအားမြင့်မားလာတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။ .
၇။ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး တိုးတက်စေပါတယ်
ပိုပြီး မြန်မြန် ကခုန်လေ၊ နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်လေဖြစ်တာကြောင့် နှလုံးကျန်းမာရေး ပိုကောင်းလာစေပြီး ပိုမိုသန်စွမ်းလာနိုင်ပါတယ်။ အီတလီနိုင်ငံက လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့ လူနာတွေထဲမှာ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း ကရတဲ့ စုံတွဲအကဖြစ်တဲ့ ဝေါ့ဇ်အကကို လေ့ကျင့်ထားသူတွေဟာ သာမန်စက်ဘီးလေးစီး၊ လမ်းလေးလျှောက်ရုံလောက် ပုံသေ လှုပ်ရှားထားသူတွေထက် နှလုံးကျန်းမာရေးနဲ့ အသက်ရှူရ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး နေထိုင်လို့ ပိုကောင်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ .
၈။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ခွန်အား၊ ဟန်ချက်ညီမှု ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်
ကခုန်ခြင်းဟာ လျှင်မြန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထားရှိဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုမို ထိန်းသိမ်းလာနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကခုန်တာဟာ သာမာန် လမ်းလျှောက်၊ စက်ဘီးစီးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေလို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပိုင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲ သုံးပြီး လှုပ်ရှားရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ခေါင်းအစ၊ ခြေအဆုံး အရေးအကြီးဆုံး အပိုင်း (၃) ခုလုံးကို လှုပ်ရှားရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရရင် ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သား တစ်ချို့ကိုပဲသုံးရတာ မဟုတ်ဘဲ ကြွက်သား အားလုံးကို သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ . အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ ချော်လဲကျမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကခုန်ခြင်းဟာ ဒီစိုးရိမ်မှုတွေကို အနည်းနဲ့အများ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရားမှုအထူးပြုဂျာနယ်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ တန်ဂိုအကဟာ အသက်ကြီးသူတွေအတွက် ဟန်ချက်ညီမှု ပိုကောင်းလာအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ .
၉။ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို တိုးတက်စေပါတယ်
အကသင်တန်းတစ်ခုဟာ မိတ်ဆွေအသစ်ရှာဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီး ကောင်းမွန်စေတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ စိတ်ခွန်အားပေးနိုင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိနေတာပါ။ ဒီဆက်ဆံရေးတွေက သင့်ကို ပိုပြီး ပျော်ရွှင်စေနိုင်၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့ချပေးနိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုပါ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ [1, 3].
၁၀။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ့ တန်ဖိုးထားမှု မြင့်မားလာနိုင်ပါတယ်
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကခုန်သူတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲ့ တန်ဖိုးထားမှု မြင့်မားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကခုန်ခြင်းဟာ အသက်အရွယ်မရွေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ အက အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက် ကပွဲခန်းမတွေမှာ ငြင်သာစွာကခုန်တာဟာ နာတာရှည်ရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ ရွေ့လျားရခက်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်။ အခြားသော ကခုန်မှုတွေမှာလည်း ကလေးအရွယ်တွေဟာ သူတို့စိတ်ကြိုက် လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြနိုင်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်တွေ ထုတ်ဖော်ပြနိုင်သလို စည်းကမ်းရှိမှု၊ မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားနဲ့ အခြားသော တိုးတက်မှု ခြေလှမ်းတွေကိုပါ သင်ယူနိုင်စေမှာပါ။ .
ဒါကြောင့် အခုပဲ သင်အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ပြီး ကခုန်လိုက်ပါတော့။ ကျန်းမာ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာ အက အစီအစဉ်ကိုထည့်ပြီး ကခုန်လိုက်ပါစို့။